Ka Ganacsi Isbeddellada Kala Doorashada | vfxAlert official blog
Fursadaha ikhtiyaariga ah waa fududahay: ka ganacsiga isbeddelka
Dhaqanku wuxuu muujinayaa iyada oo aan loo eegin nooca hantida (xulashooyinka, saamiyada, mustaqbalka) ganacsiga ku saabsan isbeddelka kiisaska badankood wuxuu ku dhammaanayaa faa'iido. Sida calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah ikhtiyaarrada leh waqtigii dhicitaanka ee dhicitaanka, iyaga, waxaa lagama maarmaan ah in la helo jihada qiimaha qaarkood.
Waa tan qeexitaanka isbeddelka:
Downtrend ama «bearish» isbeddellada . Mid kasta oo xiga ee ugu sarreeya (sare) iyo kan ugu yar (berkeda) ayaa ka hooseeya kii hore.
Uptrend ama «bullish» isbeddel . Qiimo kasta oo xiga max / min wuu ka sarreeyaa kii hore.
Si loo fududeeyo qiimeynta, khadadka isbeddelka ayaa lagu sawiray garaafka ugu yaraan seddex ugu badnaan / min. Koorsooyinka ku saabsan ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah ee loogu talagalay talada cusub ee loo yaqaan 'Newbie's counsel' si loo furo macaamillada kaliya ee jihada isbeddelka aasaasiga ah.
Suuq aan lahayn jiho cad (dhaqdhaqaaq fidsan ama dhinaca dambe ah) kuma habboona ganacsiga ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Ganacsigu wuxuu suurtogal u yahay oo keliya xaaladaha guryo ballaadhan oo ballaadhan oo leh ugu yaraan 3-4 shumacyo hal jiho marka aad furi karto macaamil-xilli-gaaban oo dib-u-soo-kabasho ah oo ka imanaya geesaha kanaalka.
Ka ganacsiga ganacsiga
Fursadaha leh muddada-gaaban, habka ugu wax ku oolka badan ayaa ah in la furo macaamillada ka dib burburka khadka isbeddelka iyo soo noqoshada soo socota ee jihada ugu weyn. Waxaad ku arki kartaa tusaalooyinka xaaladaha noocaas ah sawirrada hoose:
Markii aan aragno astaamaha ugu horreeya ee dib u noqoshada, waxaan fureynaa CALL-ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo kor u kacaya ama ikhtiyaar PUT. Muddada ganacsigu waxay kuxirantahay miisaanka garaafka. Nasiib darrose, in badan oo ka mid ah xulashooyinka la isku halleyn karo ayaa la shaqeeyey, maxaa yeelay xilliyadooda dhicitaanku waa ugu yaraan 2-3 jeer ka dheer muddadii aan u doorannay falanqaynta.
Waqtiga ballaadhan ee aad aragto isbeddel xoog leh, ayaa sii dheeraanaya ganacsigu .
Ikhtiyaarrada Lagu Taliyay : «WAC / SOO DIR», «Soohdinta Dibadda / Gudaha», «Hal Taabasho», «Wuxuu Dhex Joogaa / Dibedda U Baxaa».
Istaraatiijiyadda ka-hortagga isbeddelka ee ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah
Ka ganacsiga ku-beddelashada qadiimiga ah ayaa faa'iido leh oo keliya marka dhaqdhaqaaqu xoog yeesho oo muddo dheer sii dheeraado. Cidhifka marinka qiimaha waa inuu isku dhawaadaa. Way adkaan kartaa in laga helo jid cidhiidhi ah sida suuqa oo kale.
Qiimuhu badanaa badanaa wuxuu ku socdaa tiro aad u ballaaran. Ganacsaduhu wuxuu u baahan yahay inuu feejignaado si uu u ogaado dhaqdhaqaaqyadan. Intaa waxaa dheer, istiraatiijiyadda ganacsiga ee ka soo horjeedda isbeddelka ayaa faa'iido badan u yeelan kara dabaq ballaadhan.
Kanaalka qiimaha waa inuu buuxiyaa shuruudaha gaarka ah. Ma aha inay is barbar socoto (tusaale ahaan inta lagu guda jiro sameynta tirooyinka garaafka qaarkood). Ganacsiyada waxaa laga furi karaa bartamaha kanaalka labada jiho iyo goorta ay ka baxayaan xuduudaha. Si kastaba ha noqotee, ganacsaduhu waa inuu sidoo kale xakameynayaa isbeddelka la doorbidayo, haddii la heli karo.
Calaamado lagu furayo PUT-ikhtiyaar ayaa kor-hoos ka noqon doonta geeska kore ama dhexda. Sida ikhtiyaarka CALL-ikhtiyaariga ah, astaamaha lagu furayo ganacsiga ayaa dib uga soo laabanaya xagga hoose ama kanaalka dhexe. Istaraatijiyadaha ganacsiga ee ka dhanka ah isbeddelka ayaa sidoo kale bixin kara calaamado badan oo ikhtiyaar ikhtiyaari ah haddii ganacsiyada ay yaqaanaan sida loo isticmaalo.
Celceliska u guurista sida tilmaame isbeddel aasaasi ah
Aaminaada | ee tilmaamayaasha Celceliska Guurista (MA) waxaa lagu hubiyay fikradda celceliska qiimaha qiimaha muddada go'an. Tilmaamuhu wuxuu raadraacayaa xoogga iyo jihada isbeddelka si sax ah. Haddii tilmaamehan kor loo jiheeyo, kan ayaa kor u kacaya iyo dhinaca kale hoos u dhaca. Ka weyn waa MA, kan ka sii xoog badan ayaa ah dhaqdhaqaaqa isbeddellada.
Xulashada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah, ganacsatadu waxay u isticmaalaan celceliska dhaqaaqa sida khadka caadiga ah ee isbeddellada. Burburka khadka oo ay ku xigto dib u noqosho waxay noqon doontaa calaamad lagu furo ganacsi. Calaamadda kale ee lagu furayo macaamilka waa kala goynta khadka MA oo sii wadaya dhaqdhaqaaqa oo ay weheliso isbeddellada ugu weyn.
Si kastaba ha noqotee, istiraatiijiyadda ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee shaqeynaya, hal Celcelis Dhaqdhaqaaqa kuma filna sababtoo ah dib u dhaca taas oo la xiriirta qiimaha hadda jira. Si loo hagaajiyo saxnaanta ganacsatada calaamadaha waxay adeegsadaan celcelis ahaan "dheer" iyo "gaaban".
Hal celcelis dhaqaaq ah istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaar ah kuma filna. Isku-darka celceliska "gaaban" iyo "dheer" ayaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo saxnaanta calaamadda. Tirada xilliyada biilku waxay kuxirantahay hantida ganacsiga. Kuwa ugu kalsoon ayaa ah lammaanaha ay muddooyinka ku kala duwan yihiin 5 ama ka badan. Tusaale ahaan, waad baari kartaa SMA (5) + SMA (20), SMA (10) + EMA (50), SMA (20) + SMA (100).
Calaamadaha leh heer sare oo awood ah ayaa la helaa marka celceliska uu ka gudbo midka ugu dhakhsaha badan: hoosta ilaa sare - CALL-option, laga bilaabo kor ilaa hoose - PUT-option. Dib u soo celinta celceliska "dheer" ee dhinaca isbeddelka asaasiga ah ayaa sidoo kale loo arki karaa inay tahay calaamad.
Markuu ganacsaduhu go'aaminayo waqtiga dhicitaanka ee ikhtiyaarka isku-darka Celceliska Dhaqdhaqaaqa, wuxuu u baahan yahay inuu eego taariikhda xigashooyinka (muddada ku habboon). Waa inuu baaro daqiiqadaha markii celceliska noocaas ahi ay ka gudbayeen khadadka muddada dheer (ugu yaraan 3-6 bilood). Ganacsaduhu wuxuu ubaahan yahay inuu helo celcelis ahaan shumacyo u dhexeeya inta udhaxeysa isgoysyada taas oo ku jirtay meel faa'iido u leh macaamil ganacsi.
Ikhtiyaarrada Lagu Taliyay : «WAC / SOO DIR», «Wuxuu Dhex Joogaa / Dibedda U Baxaa», «Soohdinta Dibadda / Gudaha».
Ichimoku Binary Options Trading Signals
Cloud Ichimoku ama Ichimoku Kinko Hyo waa tilmaame wax qabad badan leh oo si fiican ula shaqeeya dhammaan noocyada hantida. Waxaad kaheli kartaa tilmaamehan dhamaan meheradaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Waxaa jira khadad badan oo ka caawiya ganacsatada inay aqoonsadaan calaamadaha. Aynu eegno daruurta Ichimoku ee ku taal jaantuska:
Ichimoku wuxuu muujinayaa dhowr nooc oo isbeddello ah (dhaqdhaqaaqyo gaagaaban, dhexdhexaad ah, iyo kuwo muddo-dheer ah) isla waqtigaas. Iyada oo gacan laga helayo tilmaamahan ganacsatadu si ay u qeexaan waqtiga dhicitaanka iyadoon falanqeyn dheer la sameyn.
Ilaa iyo inta qiimaha uu u socdo agagaarka Ichimoku ama gudaha, suuqa wuxuu ku yaalaa meel siman. Heerarka firfircoon ee taageerada iyo iska caabinta ayaa noqon doona geesaha. Haddii qiimaha uu ka gudbo xadka kore ee Kumo, isbeddelku kor ayuu u kacayaa. Markay ka gudubto xadka hoose, waa hoos u dhac. Khadadka Tenkan-sen waxaa loo tixgeliyaa isla tilmaame isbeddel ah.
Sadarka Kijun-sen wuxuu muujinayaa suurtagalnimada isbeddel isbeddel ah. Isgoyska khadkan jaantuska khadka tooska ah wuxuu cadeynayaa dib u noqoshada mustaqbalka.
Calaamadaha ugu horreeya . Qadka Chinkou Span wuxuu jajabiyaa garaafka. Haddii tani ka dhacdo xagga sare-hoose, waad furi kartaa xulashada 'PUT-option'. Haddii xariiqa ay ka timaado xagga hoose-sare, waxaad u baahan tahay inaad furto CALL-option.
Calaamadda labaad . Khadadka Tenkan wuxuu Kijun-Sen u horseedaa hoosta ilaa sare. Xaaladdaan waxaa loogu magacdaray 'Cross Cross' oo Dahab ah, waana inaad furtaa CALL-option. Haddii xariiqa uu ka yimaado kor ilaa hoose, kan waxaa loogu yeeraa “Cross Cross”. Xaaladdan oo kale, waa inaad furtaa 'PUT-option'.
Calaamadda saddexaad . Waxaan u dhaqannaa si isku mid ah. Haddii xariiqa Senkou-A uu gudbo, khadka Senkou-B ee xagga hoose ilaa kor waa CALL-option. Haddii tani ay ka dhacdo kor ilaa hoos, tani waa ikhtiyaarka PUT-ka.
Fiiro gaar ah u yeelo burburka jaantuska qiimaha ee khadadka Senkou-B, iyo Chinkou-Span. Tani waa calaamadaha binary ee ugu kalsoon. U isticmaal inaad ku furto dhowr ikhtiyaar dhanka jihada isbeddel xoog leh.
Cloud Ichimoku wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa waqtiga 'M30-H4'. Waqtiyada yar yar, waxaad isticmaali kartaa khadadka Kumo. Jadwalka waqtiga ee D1 iyo wixii ka sareeya, waxaad ka faa'iideysan kartaa calaamadaha khadadka isbeddelka.
Ikhtiyaarrada Lagu Taliyay : «WAC / JOOJI», «Ikhtiyaarka lammaanaha», «Hal Taabasho», «Wuxuu Dhex Joogaa / Dibedda U Baxaa», «Soohdinta Dibadda / Gudaha».
Aan soo koobno . Ganacsiga isbeddelku wuxuu noqon karaa mid faa'iido leh haddii falanqayntaadu sax tahay oo waqtiga dhicitaankiisu sax yahay (ugu yaraan 3-5 xilli). Xusuusnow, haddii aad rabto inaad aragto sida calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ahi u shaqeeyaan, ku tijaabi koontada demo marka hore. Kadib waxaad u gudbi kartaa xirfadaha dhabta ah.